Christian Life | Calvary Burmese Church
May 27, 2012 May 27, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၂၀၁၂ နှစ်၏ မိခင်များနေ့ကို May 13 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ Sayama Naw Endeavour မှတရားဒေသနာ ဟောကြားပြီး၊ အသင်းသူအသင်းသားများ၏ မိခင်များကို ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ presentation ပြုလုပ်ခြင်း များကိုပြုလုပ်ပါသည်။ အမျိုးသားမိတ်ဿဟာရအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပါသည်။ … ဆက်ဖတ်ရန်
Lesson From King David
April 19, 2012 December 13, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ဧပြီ (၁၅) ရက်နေ့မှာ ဆရာမခေါန်ဂျာ က ဒါဝိဒ် ဘုရင်ကြီးအားဖြင့် သင်ခန်းစာယူပြီး ခွန်အားယူရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒါဝိဒ် ဘုရင်ကြီးဟာ အပြစ်ကြီးသူဖြစ်ပေမယ့် Continue reading →
February 22, 2012 April 5, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ကျွန်ုပ် သည် ထာ ၀ ရ ဘု ရား ကို သိ သော ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယန် မိ ဘ နှစ် ပါး မှ မွေး ဖွား ခဲ့ ပါ သည်။ သို့ သော် လည်း ခေတ် ပညာ မ တောက် တ ခေါက် တတ် ပြီး မိ မိ မြို့ နေ ထိုင် ရာ အ နီး တွင် လည်း မိ မိ ကို နား ပေါက် အောင် ဟော ပြောနိုင်သူမရှိပါ။ ပညာတတ် ကျောင်းဆရာတဦးကိုတော့ အရမ်းလေးစားခဲ့ပါသည်။ သူ၏ သိပ္ပံပညာထူးချွန်မှုကို အားကျသည်။ ဓါတ်ပုံပညာ စတီရီယို၊ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ သကြား၊ဆေးဝါးဖေါ်စပ်ခြင်း၊ အရက်ချက် ဓါခွဲခန်း၊ နာမည်ကြီး ဓါတုဗေဒ ကျောင်းဆရာ စသည့် လောကပညာ များကို လေ့လာ တပည့် ခံချင်သည် ဆက်ဖတ်ရန်
Rev. Saw Ler Htoo’s Sermon
January 11, 2011 August 1, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
December 14, 2010 August 1, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်၌ဟောသော ဆရာမခေါန်ဂျာ၏တရားဒေသနာ
December 9, 2010 July 12, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ဆရာဇော်သူလင်း၊ Bible Study at Baltimore home cell
December 8, 2010 August 1, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ဘုရားစကားနားထောင်ဒါဟာ ကောင်းကြီးခံစားရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဒါဆိုရင်မမှန်ပါဘူး။
ကောင်းကြီးခံစားချင်လို့ နားထောင်ဒါမဟုတ်ပဲ၊ ဘုရားမို့လို့ ဘုရားစကားနားထောင်ဒါဖြစ်သင့်တယ်။
Rev. Dr. Robert Thawng Hlei’s Sermon in CBC
November 29, 2010 July 12, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
[yahoo id=17590349 vid=6768900 w=600 h=400 thumburl=http://l.yimg.com/a/p/i/bcst/videosearch/9597/100324853.jpeg]
November 23, 2010 August 1, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
နိုဝင်ဘာလ (၂၁) နေ့ ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဟောတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။
Praise God by3couples on Christian family Sunday (Calvary Burmese Church)
Thanksgiving Message (Priest Be Bin Htoo)
November 18, 2010 July 12, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်ရဲ့ Thanksgiving နေ့ရက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးဘီဘင်ထူး
November 10, 2010 July 12, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၂၀၀၈ ခုနှစ်ခန့်က ဆရာဦးဇော်ဝင်းအမေရိကားကိုလာရောက်ခဲ့စဉ်က ကရာနီမြန်မာအသင်းတော် ၀ါရှင်တန်ဒီစီမှာဟောပြောတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးခွန်အားရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
[yahoo id=15908334 vid=6124933 w=600 h=400 thumburl=http://l.yimg.com/a/p/i/bcst/videosearch/11603/94410448.jpeg]
October 31, 2010 September 30, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်၏ အသစ်ဖွဲ့စည်းသော သင်းထောက်လူကြီးများအတွက် သင်းထောက်များတို့ရဲ့
တာဝန် နှင့်ပတ်သက်ပြီးခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း တစ်ခုကို အောက်တိုဘာလ (၃၀) ၂၀၁၀ ၌ ကိုမြင့်လွင်-မလုဘူ တို့နေအိမ်တွင်ပြုလုပ်ပါသည်။ ပုသိမ်မြန်မာနှစ်ချင်းအသင်းတော်၏ သိက္ခာတော်ရဆရာ ဦးထွန်းလှမှ သင်းထောက်လူကြီးတို့ သိအပ်၊ စောင့်ထိန်းအပ်သော အရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက်တွန်း ဝေငှ ခွန်အားပေးသွားပါသည်။
အလားတူ ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းအစီအစဉ် တစ်ခုကို ဗာဂျီးနီးယားတွင်နေထိုင်သော ကရာနီမြန်မာ အသင်းတော် သင်းထောက်လူကြီးများအတွက် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်၊ ၂၀၁၀ ရက်နေ့၌ အန်တီလာစီး နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး သိက္ခတော်ရ ဆရာဦးထွန်းလှ မှဆက်လက် ဝေငှခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။